Falanqeynta Kulanka AC Milan Vs Crotone Ee Horyaalka Serie A Italy
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Falanqeynta Kulanka AC Milan Vs Crotone ee Horyaalka Serie A italy
Kooxda AC Milan ayaa Garoonkeeda San Siro ku martigeliso kooxda Crotone Kulan ka tirsan Horyaalka Serie A-da.
AC Milan waxaa ka maqnaan doona da’yarka reer Spain Brahim Diaz iyo daafaca dambeedka dhexe ee reer Denmark Simon Kjaer oo labaduba dhaawacyo qaba. Taas ka sokow ma jiro dhaawacyo adag oo uu heesto tababare Stefano Pioli ayaa la rajeynayaa inuu heysto koox buuxda oo taam ah.
Dhaawac: Simon Kjaer, Brahim Diaz
Dhaawac: Salvatore Molina, Giuseppe Cuomo, Luca Cigarini
Shaki: Pedro Pereira
Lix kulan oo fool-ka-fool ah oo ay wada ciyaareen labada kooxood, AC Milan ayaa haysata faa iidada ugu badan. Waxay badiyeen shan kulan midna bar baro.
Labadan naadi ayaa markii ugu dambeysay iska hor yimid sanadkii hore horyaalka Serie A, iyadoo AC Milan ay 2-0 ku garaacday kooxda Crotone. Goolal ay kala dhaliyeen ciyaaryahanka khadka dhexe Franck Kessie iyo weeraryahanka da’da yar ee reer Spain Brahim Diaz ayaa xaqiijisay guusha AC Milan.
Previous articleFalanqeynta kulanka Real Betis Vs Barcelona ee Horyaalka La-liga Spain
Next articleEverton oo Mucjiso ku noqotay Manchester United ciyaar ku dhamaatay bar-baro 3-3 ah